Dhaleeco aan meel loo dayin - Latest News Updates
Dhaleeco aan meel loo dayin
Cunugaan yar ee aqoonta ku liito, oo dhaleeco adag dusha kala koray mas’uuliyiin Soomaaliyeed, ee soo qoray waxyaalo isaga ka weyn, oo ula baxay BaadiGoob, waxaan isweydiinayaa in uu la socdo iyo in kale in uu galay fal dambiyeed loo yaqaano “Dhaleeco”, in maanta uu yahay Dhaleeceeye oo mutaysan karo in Maxkamad la hor keeno.
Mala socoyaa in wuxuu qoray hadii uusan Maxkamada horteeda uusan la imaan cadeen iyo marag, in ciqaab iyo ganaax adag uu mutaysan karo.
Waxaan si adag kula talinayaa kuna dhiiri gelinayaa in shaqsiyaadkii ka tirsanaa Dowladii hore ee loo gaystay Dhaleeceentaas adag in ay tilaabo Maxkamadeed qaadaan, madaama dhaawac adag loo gaystay sharaftooda, karaamadooda iyo xurmadooda.
Waa in sharciga uu shaqeeyaa, lana shaqaysiiyo.
Waxaan kaloo ka codsanaynaa Xeer Ilaaliyaha guud, in dhaleeceeyahaan baaritaan balaaran uu ku sameeyo waxa uu soo qoray, ka dibna u gudbiyaa Maxkamada.
Dhinaca kale, in Madaxtooyada Qaranka Soomaaliyeed lagu casumo Dhaleeceeye isla markaana MW MC. Farmaajo uu ku soo dhaweeyo iskuna sawiro Dhaleeceeye u gaystay deedifo Siyaasayiin Soomaaliyeed, qaarkoodna Xildhibaano Qaran yihiin, waxaan u arkaa arin aad u fool xun oo lagu yaq yaqsado, islamarkaasna lagu bahdilayo sharaftii, karaamadii iyo xurmadii uu xambaarsanaa magaca qiimaha weyn ee Madaxweyne Qaranka Soomaaliyeed,
in MC. Farmajo asoo xambaarsan magaca xurmada leh ee aastaanta u ah Qaranka iyo Shacabka Soomaaliyeed uu ku soo dhaweeyo Madaxtooyada Qaranka Deedifeeye waxay hoos xariiqaysaa in Farmaajo shaqsi ahaan ay ka maqan tahay garashada haybada iyo karaamada uu leeyahay magaca uu xambaarsan yahay, anagana Xisbi ahaan aan markasta magacaas kor u qaadnaa.
Waa ayaan darro ninka maanta MW inoo ah uusan lahay dhaqan iyo ficil Madaxweynanimo.
Dott.Abuukar Nuur Xuseyn
Gudoomiyaha Xisbiga BDem.